धमाकेदार एक्सनका साथ ऋतिक र टाइगर ‘वार’मा, हेर्नुहोस् ट्रेलर ! - साक्षी खबर धमाकेदार एक्सनका साथ ऋतिक र टाइगर ‘वार’मा, हेर्नुहोस् ट्रेलर ! - साक्षी खबर
धमाकेदार एक्सनका साथ ऋतिक र टाइगर ‘वार’मा, हेर्नुहोस् ट्रेलर !
भदौ १०, २०७६ | ३६६ पटक पढिएको | साक्षी खबर
बलिउड अभिनेताद्वय ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफको एक्सन प्याक्ड फिल्म ‘वार’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । दुवै अभिनेता आ–आफ्नो एक्सन र स्टन्टका कारण परिचित छन् तर पहिलो पटक उनीहरु फिल्म ‘वार’ मा देखिँदैछिन् । फिल्मको ट्रेलरले एक्सन र जबरजस्त सस्पेन्स लिएर आएको छ । फिल्म २ अक्टोबरमा रिलिज हुँदैछ । दर्शकमा यो फिल्मको व्यग्र प्रतिक्षा छ ।
फिल्‍मको ट्रेलरमा ऋतिक र टाइगर दुबैको अवतार जबरजस्त देखिएको छ । फिल्ममा ऋतिक कबीरको भूमिकामा छन्, जो सेनाका अधिकारी हुन् । तर, अब उनी बागी भएका छन् । उनीसँग सामना गर्न उनकै बेस्‍ट स्‍टूडेन्ट खालिद उर्फ टाइगर श्राफ उत्रिन्छन् । फिल्मको एक्सन सिन जबरजस्त छ र ऋतिक र टाइगर यस प्रकारको एक्सनमा निकै जचेका छन् ।
यो फिल्मलाई सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गरेका हुन् । ‘वार’ को निर्माण यश राज प्रोडक्सनले गरेको हो । निर्देशक सिद्धार्थ भन्छन्, ‘एक ठूलो एक्सन चेज सिक्वेन्सका लागि सुपरबाइक्सलाई पोर्चुगलको सबैभन्दा अग्लो हिमाल ‘सेरा दा एस्ट्रेला’ मा हाईस्पीडमा दौडाउनु परेको थियो । सिक्वेन्स गर्नका लागि र यी सुपरफास्ट बाइक्सलाई चलाउन ऋतिक र टाइगरले प्रशिक्षण लिएका थिए ।’
समुद्री तलभन्दा ‘सेरा दा एस्ट्रेला’ को उचाई ६ हजार ५ सय ३९ फिट छ । फिल्ममा आशुतोष राणा र वाणी कपूर पनि प्रमुख भूमिकामा छन् । हिन्दी, तमिल र तेलुगू भाषामा ‘वार’ रिलिज गरिनेछ । टाइगर(ऋतिकबीच फिल्मांकन गरिएको एक्सन र स्टन्ट सिन ४ एक्सन निर्देशकको निगरानीमा भएको हो । यो फिल्मले ऋतिक र टाइगरको पुरानो फिल्मको रेकर्ड ध्वस्त पार्ने देखिन्छ ।